Momba ahy – Eritreritra mandalo
Amin’ny blaogy ary amin’ny blaogy madinika, Terakasorotany no solonanarako. Eo amin’ny tetikasa Wikimedia dia Jagwar no solonanarako. Miasa amin’ny kajimirindra eto Paris aho. Teraka tamin’ny 1993 aho tany Ambatondrazaka, Madagasikara, ary niaina tany folo taona aho. Ankehitriny dia monina eto Paris aho. Ho an’ny fampahalalana fanampiny dia vangio ny pejiko LinkedIn.
2 replies on “Momba ahy”
Leave a Reply to T.Rabetokotany Cancel reply